Nahoana no Manalokaloka ny Adihevitry ny Kandidà ho Filoha ao Filipina ny Avelon’ny Nazi? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2016 9:31 GMT
Lasa lohahevitra malaza tany Filipina nandritra ny adihevitry ny kandidà filoham-pirenena ofisialy faharoa ilay Nazi Minisitry ny Fampielezankevitra, Joseph Goebbels, taoriana kelin'ny fampitahana nataon'i kandidà Filoha lefitra Jejomar Binay ho Goebbels ny kandidà mifaninana aminy.
Mar Roxas, kandidà antokon'ny fitondrana, Sekreteran'ny Atitany teo aloha, no nitondra ny fiampangana ny filoha lefitra ho nanao kolikoly nandritra ny adihevitra, nahatonga an'i Binay hiantso an'i Roxas hoe “Goebbels” noho ny nanaovana azy ho mpanolikoly. “Ny fitsarana ihany no afaka manapa-kevitra raha meloka aho na tsia, tsy ny fiampanganareo ry Roxas, Goebbels no tiako lazaina fa miala tsiny,” hoy Binay.
Nilaza ny Senatera Grace Poe, kandidà ho filoham-pirenena lohalaharana sady mahaleotena, ho sakaizan'i Goebbels ihany koa i Binay mba hiresahana ny asa famotsiam-bola lazaina ho misy ifandraisany amin'ny orinasan'ny mpisolovava [lalàna] an'ny filoha lefitra.
Tsy hoe miaro an'i Mar akory eto, fa raha ohatra i Mar no Goebbels , dia iza izany i Binay ?#PiliPinasDebates2016 #BilangPilipino
Oadray fampisehoana hatsikana ve ity sa adihevitra#PiliPinasDebates2016 😭😂